गायिका समिक्षा अधिकारीको तहल्का पिट्ने अर्को गीत “भुल भयो म बाट”(भिडियो) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/गायिका समिक्षा अधिकारीको तहल्का पिट्ने अर्को गीत “भुल भयो म बाट”(भिडियो)
गायिका समिक्षा अधिकारीको तहल्का पिट्ने अर्को गीत “भुल भयो म बाट”(भिडियो)
यसो त नेपाली सांगीतिक बजारमा दिनहुँ जसो गितहर निस्किरहन्छन्, तर सबै गीतले सफलता पाउँछन् भन्ने भने छैन ,कतिपय गीतहरू गीत निर्माणमा लागेको खर्च समेत उठाउन नसकेर डुबिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय फस्टाउँदै गएको नेपाली सङ्गीतको यौटा विधा हो लोक दोहोरी,अहिले लोक दोहोरी गीतले जती अन्य गीतको चाम नेपाली सांगीतिक बजारमा देखिँदैन भन्दा फरक नपर्ला।
यही लोक संगीत भित्रकी चर्चित गायिका हुन् समीक्षा अधिकारी, पछिल्लो समय समीक्षा अधिकारीका गीतहरू एक पछि अर्को गर्दै बजारमा हिट छन्, त्यसैले अहिले सर्जकहरुले बढी समीक्षा अधिकारी कै स्वर चाहन्छन् आफ्नो गीतमा।
यतिबेला उनै समीक्षा अधिकारी र सुबास खत्री को स्वरमा “भूल भयो म बाट ” बोलको नयाँ गीत बजारमा आएको छ,गीतमा शिव अखेली को शब्द रहेको छ भने संगीत ईश्वर सिंह को रहेको छ, गीतको भिडियो मा चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारीको अभिनय देख्न सकिन्छ । भिडियो लाई निर्देश सिर्जन बरालले गरेका छन्।१७ वर्षे गायिका समीक्षा अधिकारी ‘बालापन’ मै खुब चर्चा कमाउन सफल गायिका हुन् , ‘फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर, यो बालापनको उमेर’ मा भाका हाल्दै गर्दा समीक्षा अधिकारीको बालापन सकिएकै थिएन । ‘नाइँ नभन्नु ल–५’ को शीर्ष गीत गाउँदै गर्दा उनको उमेर कति नै थियो र ? पुगनपुग १३ वर्ष ।
तर, बालापनमै समीक्षाले जसरी आफूलाई ‘पार्श्व गायिका’का रूपमा पेस गरिन्, त्यसअनुरूप उनको चिनारी बनेन। गीत खुब चल्यो, उनी चलिनन् ।
लकडाउनको बखत सार्वजनिक गीत ‘माया मारेर’ले भने संगीत पारखीहरूमाझ बेग्लै झंकार पैदा गर्‍यो । त्यसपछि गीतकार र संगीतकारले समीक्षालाई पत्याउन थाले। अन्ततः एकपछि अर्को गीतले उनलाई पच्छ्याइरह्यो । कतिसम्म भने, एकैदिन पाँचवटासम्म गीत रेकर्ड गर्न थालिन् समीक्षाले ।
‘आधी कपाल’, ‘तिम्रै मायाले’, ‘पिपलु बर’, ‘नबोली नबोली’ जस्ता गीतहरूबाट समीक्षा चर्चाको उचाइमा उक्लिइरहिन् । लकडाउनयता मात्र उनले १५० गीतमा स्वर दिइसकेकी छन् । समीक्षाको ‘पछ्यौरी लिस्यो’ गीतले युट्युबमा करोड भ्युज पाएको छ ।
उमेरले १६ वर्ष टेक्दै गर्दा उनले लोभलाग्दो सफलता हाँसिल गरेकी छन् । ‘सोचेकै थिइनँ’ हालैको एक मध्याह्न समीक्षाले उत्साहित भावमा सुनाइन्, ‘यति छोटो समयमा यतिबिघ्न माया पाइएला भनेर ।’
लाग्छ, यतिबेला उनकी सरस्वती दाहिना छिन् । आखिर उनी कस्तो पृष्ठभूमि र धरातलमा टेकेर यति तीव्रताका साथ छलाङ मारिरहेकी छन् ? कथा घतलाग्दो छ ।
जब गाउँमा ‘छक्का पन्जा-३’ पुग्यो
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका लाहाचोक गाउँ, जहाँ समीक्षा जन्मिइन् र हुर्किइन् । सोही गाउँमा चलचित्र छक्का पञ्जा–३ को छायांकन हुँदै थियो । त्यसबेला समीक्षा स्थानीय महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत थिइन् । उनी अध्ययनरत विद्यालयमा नै चलचित्रको छायांकन हुँदै थियो ।
चलचित्रको फ्रेमभित्र उनी पनि ‘झल्याक-झुलुक’ देखिएकी छन् । यद्यपि उनलाई त्यससँग खास सरोकार थिएन । सरोकार थियो त आफ्नो गायकीमा । समीक्षा गाउनमा रूचि राख्थिन्, जुन कुरा छायाँकार पुरुषोत्तम प्रधानले थाहा पाए ।
उनले आफ्नो मोबाइलमा समीक्षाले गीत गाएको भिडियो खिचे । फेसबुकमा अपलोड पनि गरे । त्यसबेला समीक्षाले ‘नाइँ नभन्नु ल-२’ को ‘यी आँखामा तिमी छौं’ गीत गाएकी थिइन् । संयोग कस्तो पर्‍यो भने, समीक्षाले गाएको र पुरुषोत्तमले आफ्नो फेसबुकमा अपलोड गरेको यो भिडियो विकासराज आचार्यले हेर्न पुगे । चिनाइरहनु नपर्ला, विकासराज आचार्य ‘नाइँ नभन्नु ल’ शृङ्खलाका निर्देशक हुन् । उनलाई समीक्षाको स्वर गजब लाग्यो । संगीतकार बसन्त सापकोटाले पनि रूचाए ।
धेरै स्थानमा समीक्षाकै अगाडि गीतको तारिफ हुन्थ्यो । तर, नजिकै रहेकी समीक्षालाई कसैले चिन्दैनथे । ‘उनीहरुलाई यो गीत मैले गाएको भन्न पाए पनि हुन्थ्यो नी लाग्थ्यो, तर नचिनेको ब्यक्तिहरुलाई आफूले गाएको भनेर भन्न पनि नमिल्ने !’
विकासराज नयाँ चलचित्रको तयारीमा थिए, ‘नाइँ नभन्नु ल-५’ । विकास र बसन्तले एकआपसमा सल्लाह गरे, नयाँ चलचित्रको एक गीत समीक्षाको स्वरमा रेकर्ड गराउने ।
सुटिङमा भेट भएयता समीक्षाको छायाँकार पुरुषोत्तमसँग कुरा भइरहन्थ्यो । पुरुषोत्तमले समीक्षालाई फोन गरे र भने, ‘तिमीलाई बसन्त सापकोटा सरले फोन गर्न सक्नुहुन्छ, उठाउ ल ।’
चलेका संगीतकार बसन्त समीक्षाका लागि नयाँ नाम थियो । उनले बसन्तको बारेमा युट्युबमा खोजिन्। ‘नाइँ नभन्नु ल’ देखि धेरै चलेका गीतहरू स्क्रिनमा आए । समीक्षामा खुसीको सीमा रहेन। बाबा-ममीलाई बसन्तका गीतहरूबारे सुनाइन् ।
अब, समीक्षालाई बसन्तको फोनको प्रतीक्षा ब्यघ्र रह्यो । अन्ततः बसन्तको फोन आयो ।
‘नानी ! तिमीले गीत गाउँदै छौं । भोली नै एकजना अभिभावकका साथ काठमाडौं आउ ल’ –बसन्तले भने ।
फुपू दिदीको साथ लागेर समीक्षा खुसी हुँदै काठमाडौं आइन् ।
समीक्षा काठमाडौं ओर्लिएको भोलिपल्ट संगीतकार बसन्तसँग स्टुडियोमा पुगिन् । निर्देशक विकासराज स्टुडियोमै थिए ।
रोचक कुरा त के भने समीक्षालाई चलचित्रको गीत गाउँदैछु भन्ने समेत जानकारी थिएन ।
‘बसन्त अंकलले नानु तिमीले चलचित्र ‘नाइँ नभन्नु ल-५’को गीत गाउँदैछौ भन्नुभएपछि अझ धेरै खुसी भएँ’ सो गीत गाउँदाको क्षण उनले सुनाइन् ।
अगाडि थप उत्साहित हुँदै उनले भनिन् ‘त्यो क्षण एकदमै डर लागिरहेको थियो । तर, आफैँले आफैँलाई सम्झाएँ । आफ्नो प्रतिभा देखाउने मौका यही हो भन्ने सोचेर रेकर्डिङका लागि कोठामा छिरेँ ।’
उनले भाका हालेरै सुनाइन्, ‘कहाँ आउँछ घुमेर, यो बालापनको उमेर ।’
विकासराज, बसन्तले समीक्षाको तारिफ गरे । पारिश्रमिक स्वरूप १० हजार रुपैयाँ पनि दिए । पहिलो गीतमा १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदा समीक्षा मख्ख पर्दै स्टुडियोबाट निस्किइन् र अर्कोदिन घर फर्किइन् ।
पहिलो गीत हिट तर गुमनाम समीक्षा
समीक्षाले गीत रेकर्ड गरेर फर्किँदा गाउँमा छिमेकी, विद्यालयमा शिक्षक तथा साथीभाइमा चर्चा भइसकेको थियो । धेरैले उनलाई बधाई दिए ।
गीत सार्वजनिक हुन भने केही महिना लाग्यो ।
गीत सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन बसन्तले समीक्षालाई फोन गरेर भोलि गीत रिलिज हुँदैछ भन्ने जानकारी गराए ।
समीक्षाको घरमा इन्टरनेट थिएन । गीत कस्तो बन्यो होला ? मेरो गीतमा अरुले नृत्य गर्दा कस्तो देखियो होला ? कसरी हेर्ने होला ? समीक्षामा एकदमै उत्सुकता थियो ।
विद्यालयमा ‘इन्टरनेट’ थियो । तर विद्यालयमा मोबाइल लैजान प्रतिबन्ध थियो । तर पनि समीक्षा गीत सार्वजनिक हुने दिन मोबाइल लिएर विद्यालय गइन् । मोबाइल लगेर मात्र भएन्, उनलाई त आफ्नो गीत हेर्नु थियो ।
तेस्रो पिरियडमा कम्प्युटर कोठामा पुगिन् । शिक्षिकासँग आफूले गीतको भिडियो हेर्नका लागि अनुमति मागिन् ।
भिडियो हेर्न थालेकी के थिइन् शिक्षक सोही समय कोठामा छिरे र मोबाइल खोसिदिए । समीक्षाले आफ्नै गीतको भिडियो पूरा हेर्न पाइनन् ।
निराश हुँदै घर फर्किन् । सोहीदिन घर नजिक छिमेकीकोमा गएर भिडियो हेरिन् । दाइले मोबाइलमा पनि गीत डाउनलोड गरेका रहेछन् । घरमा परिवारका साथ बसेर गीत हेरिन् । पहिलो गीत हेर्दा छुट्टै खुसी लागेको समीक्षाले बताइन् ।
केही समयपछि गीत हिट भयो । रेस्टुरेन्टमा होस् वा सांगीतिक कार्यक्रम वा कतै सार्वजनिक सवारीमा नै किन नहोस् । बजिरहेको हुन्थ्यो, ‘बालापनको उमेर’ ।
धेरै स्थानमा समीक्षाकै अगाडि गीतको तारिफ हुन्थ्यो । तर नजिकै रहेकी समीक्षालाई कसैले चिन्दैन’थे । त्यो क्षणलाई समीक्षा सुनाउँछिन् ‘उनीहरूलाई यो गीत मैले गाएको भन्न पाए पनि हुन्थ्यो नि भन्ने लाग्थ्यो । तर नचिनेको व्यक्तिलाई आफूले गाएको भनेर भन्न पनि नमिल्ने !’
समीक्षा कक्षा ९ मा पढ्न काठमाडौं आइन् । सीडी विजय अधिकारी ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’को विजेता बनेका थिए । एकदिन केही सञ्चारकर्मीहरू विजयको अन्तर्वार्ता लिन पुगेका थिए । नजिकै बसेकी थिइन् समीक्षा ।
त्यतिबेला उनले सोचेकी थिइन् ‘यिनीहरूलाई त्यो गीत मैले गाएको जानकारी होस् । मेरो पनि अन्तर्वार्ता लिए मलाई पनि धेरैले चिन्ने थिए ।’ उनका एकजना दाइले सञ्चारकर्मीलाई भनिदिएछन्, एउटा युट्युब च्यानलमा समीक्षाको अन्तर्वार्ता आयो ।
‘त्यो अन्तर्वार्ता भाइरल भयो । त्यहाँबाट पनि धेरैले मलाई चिन्नुभयो’ समीक्षा सुनाउँछिन् । त्यसपछि समीक्षाको दोस्रो गीत ‘बाबा’सार्वजनिक भयो ।
जब चल्यो ‘माया मारेर’
समीक्षाले फाट्टफुट्ट गीतहरू गाउँदै गइन् । तर चर्चा केही गीतले मात्र पाए ।
४० वटाजति गीत गाएपछि समीक्षालाई लागेछ, ‘अब म संगीतकारसँग चिनिनुपर्छ । अनिमात्र उहाँहरूले मलाई काम दिनुहुन्छ ।’
त्यसपछि धेरै संगीतकारलाई फेसबुकमा ‘रिक्वेस्ट’ पठाउन थालिन् । जसमध्ये एक थिए, नरेश खाती ।
फेसबुकमा समीक्षा र नरेशको कुराकानी भयो । सँगै गीत गाउने कुरा भयो । त्यतिबेला नेपालमा कोरोनाको त्रास सुरु भइसकेको थियो । लकडाउनको केही समयअघि गीत रेकर्ड भयो, सुटिङ भयो । भिडियोमा नरेश र समीक्षा स्वयं देखिए । केही दिनमा गीत सार्वजनिक भयो । गीतको चर्चा चुलिँदै गयो । युट्युबमा मात्र नभएर टिकटकमा समेत गीत निकै लोकप्रिय बन्यो । हालसम्म यो गीतलाई युट्युबमा एक करोड ५५ लाख बढी पटक हेरिसकिएको छ । त्यसपछि हो, समीक्षालाई गीत अफरको ओइरो लागेको ।
गाउन नपाउँदाको छट्पटी
‘माया मारेर’पछि समीक्षाको व्यस्तता यति बढ्यो कि हरेक दिन एउटा रेकर्डिङ त परेकै हुन्थ्यो। सोही व्यस्तताका बीच उनको घाँटीमा समस्या देखियो । डाक्टरले उनलाई भने, ‘६ महिना गीत नगाउँनू ।’
उनी स्टुडियो होइन, घरमै थन्किनुपर्‍यो। थुप्रै गीतहरू छोड्नुपर्‍यो।
हरेक दिन नयाँ-नयाँ गीत गाएकी समीक्षालाई यो समय कस्तो भए हुँदो हो ? ‘एकदमै छट्पटी भो । कति रोएँ’ उनी सुनाउँछिन्, ‘डाक्टरले ६ महिना रेस्ट गरेर बस्नु भने पनि आफू जतिसक्दो चाँडो ठिक हुनुपर्छ भनेर स्वास्थ्यमा एकदमै ध्यान दिन थालेँ ।’ तीन महिनाको आरामपछि भने फाट्टफुट्ट गीत गाउन थालेको समीक्षा सुनाउँछिन् ।
अहिले पनि डाक्टरले समीक्षालाई धेरै गीत नगाउन भनेका छन् । त्यसैले गीत कम गाएको समीक्षा बताउँछिन् ।
‘अफर आएका सबै गीत गाएँ भने त अहिले पनि दिनमै ५/७ वटा हुन्थे । तर हेरेर मात्र गाएकी छु’ उनले सुनाइन् । घाँटीको समस्याका कारण ‘हाइ रेन्ज’भन्दा ‘लो रेन्ज’का गीतहरू बढी गाइरहेको बताइन् ।
सानो उमेरमै पाएको लोभलाग्दो चर्चा
कलिलो उमेरमै समीक्षाले पाएको चर्चा साँच्चिकै लोभलाग्दो छ । आधुनिक होस् वा लोकलयको गीत, समीक्षा मज्जाले गाउँछिन् । हाइ र लो दुवै रेन्ज उनको राम्रो छ । त्यसैले पनि गीतसंगीत बजारमा समीक्षा खोजिएकी छन् ।
चर्चासँगै बजारमा समीक्षाको तुलना पछिल्लो समयकै केही गायिकाहरूसँग गरिन्छ । तर आफू कसैको प्रतिस्पर्धी नभएको समीक्षा बताउँछिन् । ‘मलाई कोही प्रतिस्पर्धी लाग्दैनन् । सबैको फरक–फरक प्याट्रन छ । एउटै प्याट्रन भए पो प्रतिस्पर्धा भन्ने हुन्थ्यो, होइन र ?’ उनी प्रतिप्रश्न गर्छिन् ।
काठमाडौंमा आफन्तसँग बस्दै आएकी समीक्षा हाल विजय स्मारक स्कूलमा कक्षा १० मा अध्ययनरत छिन् । अब उनलाई एसईईको तयारी गर्नुपर्ने छ । सुनाउँछिन्, ‘अब केही समय गीत कम गरेर पढाइमा केन्द्रित हुन्छु ।’
तत्काल पढाइमा बढी समय दिने योजनामा रहेकी समीक्षा त्यसपछि संगीत प्रशिक्षण लिएर अगाडि बढ्ने सोच सुनाउँछिन् ।
‘दर्शक–स्रोताले सुरुदेखि नै माया गरिदिनुभयो । अब गायनमा कसरी राम्रो गर्ने भन्ने सोँच्दै छु’ उनी भन्छिन्,–‘तत्काल पढाइमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि त्यसपछि संगीतको शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नेछु ।’
कुराकानीको अन्त्यमा समीक्षालाई सोधियो, ‘दिन रात रेकर्डिङमा समय दिनुपर्ने, सञ्चारमाध्यममा कुराकानीका लागि तयार हुनुपर्ने, फ्यानहरुसँग तस्वीर खिचाउनुपर्ने । चिटिक्क भएर हिँडनुपर्ने । साँच्चिकै ‘सेलेब्रेटी लाइफ’ कस्तो हुँदो रहेछ ?’
केही सेकेन्ड सोचिन् र बोलिन् ‘रूचिको क्षेत्र नै यही हो । पहिले धेरै कुरा थाहा थिएन । अहिले धेरै कुराहरु सिक्दै अगाडि बढिरहेकी छु । पहिलेभन्दा आफूमा केही परिवर्तन पनि ल्याएकी छु । धेरैले माया गर्नुभएको छ । भेट हुँदा फोटो खिचौं भन्नुहुन्छ । कोहीले मेरो बाबु नानी तिम्रो ठूलो फ्यान हुन् भन्नुहुन्छ । खुःसी अनि रमाइलो लागिरहेको छ ।’अब हेरौं उनै गायिका समिक्षा ,अधिकारीको नयाँ गीत भूल भयो म बाट को पूरा म्यूजिक भिडियो//